"Ural-U": yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Urolithiasis, noma urolithiasis ibizwa ngokuthi isifo obubonisa kumiswa amatshe noma isihlabathi pheshana urinary izitho. Lena zokugula kuhle okungathí sina okudinga ukwelashwa ngokushesha.
Ngo amafomu kabi isifo kudinga ukuhlinzwa. Ukuze ugweme lokhu, kusaqalwa lesi sifo, odokotela batusa ngokuthatha "Ural U". Yokusetshenziswa zomuthi, timphawu, ifomu ukukhululwa kanye contraindications ethulwa kule athikili.
Okufakiwe, ukuma, ukwakheka
Umuthi "Ural" ikhiqizwa ngesimo granules. Kuhloswe ukulungiswa ikhambi ngomlomo.
Lo muthi iqukethe geksakaly-geksanatry-trigidrogentsitratny eziyinkimbinkimbi. Iphuma ebhokisini amakhadibhodi, okuyinto ibekwe omunye ebhange nge izidakamizwa, kanye spoon sokulinganisa, inkomba iphepha bese uhlole ikhalenda.
Uyini granulate ngokuthi "Ural-U"? Yokusetshenziswa yazisa ukuthi lokhu izidakamizwa isetshenziswa ukuvimbela ukwakheka kanye nokuqedwa amatshe ezikhona urinary.
ejenti kubhekwe inhlanganisela alkalis eqinile (usawoti), elihlanganiswa acid (buthaka).
Lapho exutshwe ethafeni amanzi granulate dissociates ku-ion, njalo igcina ane-alikhali umchamo, nokulawula pH (at 6,2-7,5).
Lokhu kuvumela i-asidi we uric acid nosawoti bahlale isixazululo kanye musa yakha itshe. Ukuthi lokhu kubonakala nefroliticheskie izakhiwo ithuluzi.
Ochwepheshe bezifo, impendulo lesiguli izidakamizwa Umbuzo uwukuthi umthamo nasekuthengeni. Alkalosis kunciphisa ukumuncwa citrate e tubules kwezinso futhi kwandisa excretion yayo. Kufanele futhi wazi ukuthi kuleli cala, encishisiwe calcium excretion umchamo.
Medicine "Ural" amuncwa umzimba cishe ngokuphelele kusukela ipheshana wokugaya ukudla. bioavailability yayo imayelana 100%. Zonke izidakamizwa akheka emzimbeni womuntu, futhi ivela umchamo.
Ngokuhamba yokwelapha nale kusho akukho ukushintshwa igesi noma electrolyte yokwakheka igazi kwenzeka.
Bewazi yini ukuthi ngaphansi izinkomba angabelwa ukuba umuthi "Ural U"? ochwepheshe lezivakashi bathi kokuthatha lesi izidakamizwa ekwelapheni izifo ezithize kufanele kube kuphela emva kokubonisana ne Urologist.
Ngokusho imiyalelo, le nomuthi kuncike isetshenziswa ukuvimbela ukwakheka nokonakala calcium ne uric acid calculi ekhona e isifo urolithiasis, kuhlanganise khona amatshe esinyeni.
Ukuze porphyria sekwephuzile futhi urikozurii le imithi kuthinta pathogenesis futhi alkalizes umchamo.
Njengoba ojwayelekile, lo muthi zihlanganisa ngemithi cytotoxic ukuze kuvinjelwe yezinkinga kungenzeka.
Ukuba khona yisiphi isifo sivimbela ukusetshenziswa elimbudumbudu "Ural-U"? Iziyalezo yokusetshenziswa uthi lokhu imithi noma kunjalo akufanele ebekiwe in iziguli kwezinso esingamahlalakhona noma oyingozi futhi senhliziyo. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa alisetshenziswa izifo we ngomgudu womchamo bemvelo esingelapheki zazibangelwa nezilwanyana ezincane ukuthi aphule phansi urea; ezinzima umzimba alkalosis uhlamvu waqinisekisa endaweni yokucwaninga nokungabekezelelani kuya izingxenye izidakamizwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi le granulate "Ural-U" aluboniswa esimweni uma isiguli kufanele ubambelela esiqinile ongaphakeme sodium Ukudla (isibonelo, umfutho wegazi ophakeme noma izifo kwezinso).
Kufanele futhi wazi ukuthi ukuphepha izidakamizwa kokubuyekezwa, nokusebenza ngempumelelo yalo engakaze wafunda e izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, kanye nabancelisayo nabesifazane isimo. Ngakho-ke, lokhu izidakamizwa akukashicilelwa kubo.
Umuthi "Ural-U": yokusetshenziswa
Ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa kubhekwa ekwelapheni urolithiasis, kufanele ziyoncibilika ingilazi yamanzi abavamile.
Umthamo le imithi ikhethwa kumuntu ngamunye, kuya ukusabela umchamo fresh. Okunqumayo indlela lokuvivinywa ezicucwini zamaphepha, okuyinto, kanye izidakamizwa afakwe ebhokisini amakhadibhodi. Le nqubo ibizwa eyenziwa ngaphambi nokuphathwa granulate ngamunye. Ngenxa yalesi nkomba ofakwe umchamo, kwathi ingakapheli nemizuzu engu ezimbili uma kuqhathaniswa ngayo esikalini umbala. Lokhu kuzokuvumela ukucacisa asidi ngaphakathi 5,4-7,4.
Ekwelapheni ngasekupheleni porphyria futhi cystine amatshe kuyadingeka ukusebenzisa ukukhanya ekhethekile pH ngaphandle 7,2-9,7.
Umthamo isilinganiso ejenti 4 wokulinganisa nezinkezo ngosuku. Ngesikhathi esifanayo eyodwa kufanele baphuze ekuseni, omunye - usuku olulodwa noma ezimbili - kusihlwa.
Kubalulekile wokuqhubeka asidi ngaphakathi amabanga oyifunayo:
urolithiasis, noma okuthiwa urikozurii - 6.2-6.8;
ebukhoneni cystine amatshe - 7.5-8.5;
ngaphansi kwesikhumba porphyria - 7.2-7.5;
ekwelapheni kanye cytostatics - ncamashi 7.0.
Kuleso simo, uma wamukela pH amagugu ngenhla evamile, encishisiwe umthamo. Kusihlwa reception ukulungiselela senziwa ezincane ½ spoon nokushintsha kokudla nokufakwa.
Uma i-pH ingaphansi, inani nomuthi luyanda esilinganayo.
Ingabe kuvunyelwe ukuhlanganisa imithi ethile granulate "Ural-U"? Izibuyekezo ochwepheshe libike ukuthi akubona bonke leli thuluzi kungenziwa izidakamizwa kuhlanganiswe.
Ngokusho imfundo, "Ural-U 'ngokuhlanganyela izidakamizwa aluminium-equkethe kungavundisa ukumuncwa aluminium ion egazini. Kulokhu, nalesikhathi reception phakathi kwabo kufanele kube ubuncane amahora amabili.
Inkambo yokwelapha nale ejenti zibe zinde ngaphandle kokuphazamiseka, noma nabo. Isikhathi isilinganiso nokuphathwa umuthi izinyanga 1-6. Nokho, ukwelashwa esinembile kufanele abone udokotela kuphela.
Manje uyazi ukuthi ukuthatha "Ural-U". Ngokusho izimpendulo iziguli, lokhu kusho ibekezelelwe kahle impela. Nakuba ezimweni ezingajwayelekile, ethola isixazululo temlomo kungabangela ukucanuzelelwa inhliziyo, ukubuyisa, ukuhlanza, ubuhlungu besisu noma ikhishwe yisisu.
Ngokuvamile, ezifana side ukusabela zenzeka ngokuzimela.
Nomuthi "Ural-U": analogs babo nesineke
Umuthi okukhulunywa ngalo lapha lingase indawo? Chemical Ukwakheka nokwelapha umphumela analogue kwaleli thuluzi yilezi: "Phytolysinum Plus", "Cystone", "phytol", "ESIKHONA", "Rendesmol", ". Uro-Grand"
Ngokwe-nokubuyekezwa, "Ural-U" kuyinto umuthi kakhulu, okuyinto ngempela umsebenzi omuhle ngalo msebenzi. Iziguli eziningi ukubika ukuthi emva kokwelashwa inyanga yonke kusukela amatshe nesineke kuyaqedwa ngokuphelele. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi le nqubo kaningi kuhambisana umphumela laxative, okuletha ukungakhululeki ngokuthi isiguli.
"Tsinokap" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa
Voivod - Voivod kuyinto ... Russian
Uzungu induna namaqhubu
Magnetosphere woMhlaba: ngemiphumela ushintsho. igobolondo eMhlabeni yangaphandle
Tempering amanzi - umthombo ubungqabavu okuphakade nempilo